Gore rino iPhone ichadaidzwa kuti iPhone 6SE yekuenderera kwayo dhizaini | IPhone nhau
Kusvika kusvika muna 2016, isu tese takafunga kuti Apple yaizovhura itsva 4-inch iPhone iyo yaizodaidzwa kuti iPhone 6c. Gare gare runyerekupe rwakatanga kutenderera kuti iyi "diki" iPhone yaizodaidzwa kuti iPhone 5SE, uye pakupedzisira mudziyo mutsva wakanzi iPhone SE. Nhoroondo inogona kuzvidzokorora mushure mezhizha: apo isu tese patinomirira Apple kuti itange iyo iPhone 7, runyerekupe rutsva runovimbisa kuti avo vari muCupertino vachadaidza iyo nyowani smartphone iPhone 6SE.
Runyerekupe rutsva runodzoka kwatiri kubva kuChina, kunyange zvakadaro yave iri rakaburitswa pawebsite yeGerman apfelpage.de. Zvinoenderana nerunyerekupe urwu, Apple yatovepo akatanga kugadzira mabhokisi yeiyo inotevera smartphone uye chitaridzi chinogona kuverenga iPhone 6SE. Kufanana neruzivo rwese rwakaburitswa pamberi penguva, isu tinofanirwa kuramba takakahadzika, kunyanya kana tichifunga kuti hapana mufananidzo wekurongedzwa kweiyo inofungidzirwa kuti iPhone 6SE haisati yaburitswa.
iPhone 6SE uye kwete 7 yekushaikwa kwezvinhu zvitsva mukugadzirwa
Kana ndichifanira kutendeseka, iyo Apple guru Mark Gurman haisi iyo sosi yerudzi urwu enhau inoita kuti ndifunge kuti ruzivo rwacho harusi munzira chaiyo. Aive Gurman akataura kuti chii kusvika kutanga kwegore chaizivikanwa sekuti iPhone 6c yaizotumidzwa zita iPhone 5SE uye anga asina kukanganisa. Kuti pakupedzisira "5" yakarasika munzira yaive danho rekushambadzira yeminiti-yekupedzisira, kubvira kutanga dhizaini muna2016 nenhamba yakafanana neyeimwe yakatangwa muna2012 yakanga isiri pfungwa yakanaka kwazvo. Ichi ndicho chinhu chinogadziriswa neSamsung mune yayo Range renji nekusvetuka iyo Galaxy Note 6 uye kuenda yakananga kuChiziviso 7 kuitira kuti phablet yayo ive neakaenzana manhamba seyeGlobal S renji.
Kune rimwe divi, sekureva kwaEvan Blass, anonyatso kuzivikanwa seanobuda paTwitter uye akatoburitsa mazita maviri eiyo iPhone 7, inova nechokwadi chekuti mafoni matsva Ichavhurwa neChishanu, Gunyana 16, kunyangwe pachezvangu ndinotenda kuti Apple ichaenderera mberi nekupa yayo nyowani iPhone neMuvhuro kana Chipiri. Mubvunzo ndewokuti: vachapa iyo iPhone 6SE / Plus munaGunyana 16 kana vachazopa iyo iPhone 7 / Plus munaGunyana 12-13? Isa kubhejera kwako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Runyerekupe: Gore rino iPhone ichadaidzwa kuti iPhone 6SE uye ichaunzwa munaGunyana 16
Mwedzi mitanhatu mutirongo kune wekubira uyo akawana akakurumbira maaccount eICloud